असार २९, २०७७ माधव अर्याल
पाल्पा — सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभान बजार नजिकै पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ । दोभान बजारदेखि सय मिटर नजिकै पहिरो खसेको हो । पहिरोसँगै बिजुलीको पोलसमेत ढलेको स्थानीय विष्णुप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभान बजार नजिक खसेको पहिरो ।
झण्डै ५० मिटर माथिदेखि पहिरो खसेको छ । सोमबार बेलुकी सवा ५ बजेतिर खसेको पहिरो ठूलो भएकाले सडक खुल्न केही समय लाग्‍ने दोभान प्रहरी चौकीका प्रमुख सोमबहादुर सारु मगरले बताए । उनका अनुसार पहिरो गएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
डोजर स्ट्याण्डबाइ रहेपनि रातिमा काम गर्न नसक्ने भएकाले पहिरो खुलाउन समय लाग्‍ने प्रहरीले जनाएको छ । रुपन्देहीतर्फ र पाल्पातर्फबाट गएका सवारी साधन दोभान, भुतखोलातर्फ नै रोकिएको छ । रुपन्देहीतर्फबाट आएका सवारी साधन सिद्धबाबामै रोकिएका छन् ।
लसुने–खोकखोलामा ठूलो पहिरो
सिद्धार्थ राजमार्गको लहसुनेबाट खोकखोला (रम्भा गाउँपालिका केन्द्र) जाने सडकमा ठूलो पहिरो खसेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीका अनुसार झण्डै सय मिटर लम्बाई र ५० मिटर जति चौडाइको पहिरो खसेपछि तीन दिनदेखि सवारी साधन चल्न सकेको छैन ।
पहिरो खस्दा खोकखोला,अगाहाखोला लगायतका स्थानमा जाने सवारी साधन रोकिएका छन् । पैदलयात्रुलाई समेत समस्या छ ।
प्रकाशित : असार २९, २०७७ १९:२३
असार २९, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — 'एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि’अर्थात् रुसी कम्युनिष्ट नेता भी.आई लेनिनले रसियाली क्रान्तिका बेला प्रयोग गरेको सूत्र । सन् १९१७ मा राजनीतिक संघर्षमा यो सूत्र प्रयोग गरेर लेनिनले रसियाली क्रान्तिलाई सफलता दिलाएका थिए ।
लेनिनको यही ‘थ्योरी’लाई अहिले नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले उपयोग गरेका छन् । एक अर्काविरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिसहित संघर्षमा उत्रेका ओली र दाहाल अहिले दुई–दुई कदम पछाडि हटेका छन् । र, उनीहरुको बोलि फेरिएको छ, अलि नरम भएको छ । त्यसैले नेकपाभित्र ओली र दाहालको यो रणनीति बुझ्ने धेरैको चासो छ, ‘अबको एक कदम के हुन्छ ?’
ओली र दाहाल समूहबीच यसै विषयमा संघर्ष र संवाद एकसाथ जारी थियो । बैठक पटक–पटक स्थगित भएकै बेला असार २५ मा नेकपाभित्र नयाँ राजनीतिक मोड आयो । दुवै पक्षले पार्टी विभाजन हुँदैन भने तर सहमति चाहिँ के भयो ? कसैले खुलाएनन् । बरु, साउन २ सम्म बैठक स्थगित भयो ।
ओलीको अभिव्यक्ति शुक्रबार आयो भने अर्को दिन शनिबार गृह जिल्ला पुगेर दाहालले पनि हतारमा निर्णय हुँदैन भनेर केही समय तयारी गर्ने बताए । ‘हतारमा केही कुरा गरेर भोलि फुर्सदमा पछुताउने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा सतर्क छौं । देश दुर्घटनामा जाने या पार्टी दुर्घटनामा जाने कुनै गतिविधि हुन नदिनको निम्ति अन्तिम समयसम्म धैर्यतापूर्वक पहल गर्छु,' दाहालको भनाई थियो, ‘मैले हतार गर्न खोजेको भए अर्को दुर्घटना वा के हुन्थ्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ ।’
लेनिनको ‘थ्योरी’ को आधारमा दुइटा विकल्पमा ओली र दाहाल अगाडि बढ्न सक्नेछन् । पहिलो–सहमति बनाउन एक अर्कामाथि दबाब बनाउने अर्थात् दबाबका लागि दुई कदम पछाडि । दोस्रो–वारपारका लागि शक्ति संचय गर्ने, अर्थात् सम्पूर्ण तयारीसहित फेरि भिड्ने ।
यसको संकेत वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि दिन्छन् । तपाईहरुले दुवै पदबाट केपी ओलीको राजीनामा माग्नु भएको छ । उहाँले राजीनामा दिने कुनै छनक देख्नुभएको छ त ? भन्ने प्रश्नमा खनाल भन्छन्, ‘कसैका व्यक्तिगत ईच्छा र मतका आधारमा यो पार्टी चल्दैन । पार्टी सामूहिक नेतृत्वका आधारमा चल्छ । सामूहिक बुद्धि र विवेकका आधारमा चल्छ । पार्टीले गर्ने निर्णय भिन्दै हो । व्यक्तिका ईच्छा र आकांक्षा बेग्लै हो । पार्टीका निर्णयहरुलाई मानेर जानुपर्छ ।’
दाहालले पार्टीमा कोही राष्ट्रवादी र कोही लम्पसारवादी छैनन् भनेर ओलीलाई सन्देश दिईसकेका छन् । मुद्दा अब बस्ने स्थायी कमिटीमा पनि उठ्न सक्छ । ओली र दाहालबीच धेरैपटक भएका वार्ताले दुवैलाई एकअर्कामाथि कसरी दबाब बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि प्राप्त भएकै छ ।
त्यसैले नेकपाकै अरु केही नेताहरु भन्छन्, ‘ओलीले अगाडि सारेको धैर्य र संयमभित्र र दाहालले भनेको हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा नपछुताउने भन्ने शब्दभित्र लेनिनको ‘एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि’ को ‘थ्योरी’ पनि छ ।’
अर्थात् ढिलोचाँडो नेकपामा फेरि नयाँ तरिकाले टकराव देखिनसक्छ । नेकपाकै एक नेता सुनाउँछन्, ‘अहिले पार्टीमा जे भएको छ, यो ठूलो हुरी आउनु अगाडिको सन्नाटामात्रै हो ।’
विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेको बुझाईमा पनि नेकपामा ढिलो चाँडो ठूलै तनाव देखिने संभावना छ । सोमबार कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखमा उनले भनेका छन्, ‘चामत्कारिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने यसपटकको विवाद, द्वन्द्व र शक्तिसंघर्ष निर्णायक र अन्तिम हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ...यदि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गत वैशाखमा जस्तै तत्कालका लागि ओली र दाहालबीच अस्थायी युद्धविराम भयो भने पनि निकट भविष्यमा त्यो भंग हुने निश्चित छ । किनभने ओली र दाहालको सत्तासंघर्ष अस्थायी र अल्पकालीन होइन, स्थायी र दीर्घकालीन हो ।’
प्रकाशित : असार २९, २०७७ १८:५८